Andro mipetraka ao amin'ny tantaran'ny FKMP ! | FKMP
Andro mipetraka ao amin’ny tantaran’ny FKMP !
Heni-pisaorana an’Andriamanitra ny Kristianina FKMP ny alahady 02 jolay 2017 lasa teo, satria feno fahasoavana ny Fiangonana. Mipetraka ao anatin’ny tantaran’ny FKMP ny andro alahady 02 jolay 2017, satria vita soa aman-tsara ny fifidianana ny ho Mpandrindra lefitra izay hanampy ny Pretra Aomonie ny FKMP mandritra ny 3 taona manaraka.
Voafidin’ny Kristianina tamin’izany Andriamatoa RAKOTOMANANTSOA Andrianome (Meme). Entin-tsika mianakavy am-bavaka izy hahavita soa ny adidy mavesatra iantsorohany ; satria araka ny teniny dia tsy ho hefan’i Pretra, aomonie, sy ny birao irery ihany ny hanatanteraka ireo hetahetam-pon’ny kristianina tsirairay, fa kosa mangataka ny rehetra hifandrimbona, hifanome tanana, hampiasa ny talenta azon’ny tsirairay avy tamin’ny Fanahy Masina hampiroboroboana hatrany ny FKMP izay mamintsika.
Taorian’izay dia Andriamatoa Haja RAKOTOZAFY, Mpandrindra ny FKMP 2014-2017, no nandray ny fitenenana, velom-pisaorana an’Andrimanitra izy nohon’ny naha-tontosany ny adidy aman’andraikitra lehibe noraisiny. Tsy nisy hadinony tamin’ny teniny ny nisaotra ny Kristianina iray manontolo, hatramin’ny kely na ny lehibe, na ny zatovo na ny olon-dehibe. Notoniny manonkana ireo niara-niasa tamin’ny akaiky dia i Mopera Nirisoa MAHAVORINIAINA, ny birao sy ny Filan-kevitra ary ny Mpandrindra Kartie. Ary fisaorana niavaka ny vady aman-janany no namaranany ny teniny.
Mankasitraka anao manokana ihany koa izahay Haja RAKOTOZAFY, tamin’izay rehetra natolotrao ny FKMP ary mitondra am-bavaka anao sy ny ankohonanao.
Ny alahady 02 jolay 2017 ihany koa no navoaka ofisialy ho hitantsika ny logo vaovaon’ny FKMP, fifankatiavana sy fiaraha-miasan’ireo tanora 4 mianadahy eto amin’ny FKMP no nahatontosana izany. Tsy iza izy ireo fa i : Kiady RAMIHONE, Francisco RANDRIATAHIANA, Natalia BOUILLOUD, Natacha Tsianiva RANDRIA.
Zavatra roa lehibe no tiana asongadina amin’ity logo ity : ny Finoana sy ny Fitiavana.
Ny Lakroa dia i Kristy, fototry ny Fiangonana. I Victoire Rasoamanarivo kosa ny olontsambatra mpiaro ny FKMP.
Misy olona maro, manao akanjo fitafy Malagasy samihafa izay miloko maitso-fotsy-mena, ary ahitana ny “Tour Eiffel” ao ambadik’izy ireo. Mifandray tanana ireo olona ireo. Izany dia mampiseho ny fiombonan’ireo Malagasy izay maro loko, kanefa iray Tanindrazana, samy monina eto Paris sy ny manodidina, ary indrindra indrindra samy kristianina, ka iray ao amin’i Kristy.
Farany, misy Hazavàna eo ambony dia ny Fanahy Masina izay eo anilantsika lalandava.
Malagasy Katolika mino an’i Kristy ka manara-dia Azy, miasa ho Azy, mampanjaka ny Fitiavana, mizara fiadanana sy hafaliana : izany ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris.
Nampihetsi-mpo tokoa ny niainan’ny Kristianina ity andro alahady 02 jolay 2017 ity, satria tsapa fa notarihin’ny Fanahy Masina ny rehetra, fangatahana an-kira izay nataon’ny Antoko-mpihira Feon’Anjomara nanombohana ny fotoana.
Misaotra Tompo ô, noho ny Fitiavanao sy ny fitantananao ny FKMP !
Mpikatroka ao amin’ny FKMP
Previous Post: Alahady faha 13 A (Mt 10,37-42) 02/07/2017
Next Post: Talata 04/07/2017 (Mt 8,23-27)